AMISOM oo sheegtay inay Qorshaynayaan weeraro ay ku qaadayaan Deegaabada Al-Shabaab ku sugan yihiin. - Latest News Updates
AMISOM oo sheegtay inay Qorshaynayaan weeraro ay ku qaadayaan Deegaabada Al-Shabaab ku sugan yihiin.
Taliska Ciiidamada nabad ilaalinta ee midowga afrika ayaa sheegay inay bilaabayaan weeraro ay ku qaadaan deegaanada ay maleeshiyada A-Shabaab kaga sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya.
Hawlgaladan ay AMISOM sheegtay in lagu xoreynayo goobaha ay Al-Shabaab haystaan ayaa lagu wadaa inay bilawdaan bilawga sanadka cusub ee socda 2019.
Dagaaladaan ayaa AMISOM waxay sheegtay in laga fulinayo goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin gobolka jubadda dhexe,waxaana hawlgaladaasi si wadajir ah u fulinayo sida uu qorshuhu yahay ciidamada maamul gobaleedka Jubbaland, kuwa faderaalka iyo kuwa midowga afrika.
G/Jubadda dhexe oo ah gobol muhiim ah ayaa wuxuu xuduud la wadaagaa Gobolada Gedo, Bay,Sh/Hoose, iyo Badwaynta Hindiya waana gobolka kaliya ee ay Al-Shabaab ku xoogan yihiin.
Afhayeenka ciidamada AMISOM Col Richard Omwega ayaa sheegay in hawlgalkan uu qayb ka yahay qorshaha xaalada kala guurka ay AMISOM dalka kaga baxayso amnigana ay gacanta ugu galinayso dowlada soomaaliya.
Col Richard Omwega ayaa sidoo kale sheegay in hawl-galkan cusub ay qaadayaan uu gogol xaar u noqon doono in 2020 ay soomaaliya ka dhacdo doorashooyin guud oo si nabad galya ah loo qabto.
Dhanka kale qaraarkii Golaha Amaanka ee QM ee sanadkii 2017 kaas oo tirsigiisu ahaa 2372 ayaa sheegayay in dhamaan ciidamada nabad ilaalinta midowga afrika oo gaaraya 21,626 in gabi ahaan dalka ka bixi doonaan markii la gaaro sanada 2020.